ဒီလမျးကိုယျတဈယောကျတညျးလြှောကျလဲ ရောကျပါတယျ – Shinyoon
နောကျကိုလှညျ့လို့လဲ ထိုးခံထားရတဲ့ဒဏျရာ ဒဏျခကျြတှကွေီးပဲ တှတေ့ယျ အရှကေို့ကွညျ့ပွနျတော့လဲ အနာဂတျက ပနျးခငျးထားတဲ့လမျး မဟုတျပဲ အဖုအထဈတှအေရမျးမြားတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလမျးကိုယျတဈယောကျတညျးလဲ ဆကျလြှောကျရဲရမယျလေ ။
ဖေးမမယျ့လူမရှိလို့ လဲကတြိုငျးမထတော့ဘူးဆိုရငျ . . .ဒီတဈသကျပွနျထဖွဈတော့မှာမဟုတျဘူး ငယျငယျတုနျးက လမျးလြှောကျသငျခဲ့တုနျးက အခြိနျကို သတိရပါ . . .လဲကလြို့သာ ပွနျမထခဲ့ဘူးဆိုရငျ အခုခြိနျ သငျ လမျးလြှောကျတတျနမှောတောငျ မဟုတျဘူး ပွီးရငျ စကျဘီးစီးသငျခဲ့တုနျးကလဲ မှတျမိသေးတယျ မစီးတတျ စီးတတျတုနျးကလေ ဘရိတျမထိနျးနိုငျလို့လဲကသြှားခဲ့တုနျးက လာပွီးထူမမယျလို့ထငျခဲ့တာ တကယျတမျးထှကျလာတာကတြော့ ဒူးပွဲပွီလားတဲ့ ဒါဆိုမကွာဘူး စီးတတျတော့မှာတဲ့
အရငျခြိနျလေးတှပွေနျတှေးကွညျ့ပါ . . .အခုမှ လဲကလြိုကျ ပွနျထလိုကျဖွဈနခေဲ့တာမဟုတျဘူး မှေးကတညျးက ကြှနျမတို့တှေ လဲကလြိုကျ ပွနျထလိုကျနဲ့ ရုနျးကနျခဲ့ဖူးတာပါ ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီတုနျးက ငါ လမျးလြှောကျတတျခငျြတဲ့ဆိုတဲ့ စိတျတဈခုပဲ ရှိခဲ့တယျ ဖွဈပါ့မလား ဖွဈနိုငျပါမလားဆိုပွီး မတှေးခဲ့ဘူး စကျဘီးစီးတတျခငျြစိတျပဲရှိခဲ့တာ အနာတရ ဖွဈမှာကို စိတျမပူခဲ့ဘူး
အခု နညျးနညျးလေး အသကျအရှယျရလာတော့တဈခုခုလုပျတော့မယျဆိုရငျ ဖွဈပါ့မလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ အရငျကွညျ့လာတတျကွတာပါ ဆန်ဒတှေ အရငျကလောကျမပွငျးပွတော့ဘူး ။ မစရသေးတယျ အလုပျတဈခုကို ဖွဈပါ့မလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ ကွညျ့နသေမြှ ဘယျတော့မှ ဖွဈလာမှာ မဟုတျဘူး ငါ ဖွဈအောငျလုပျမယျဆိုတဲ့ စိတျနဲ့ပဲ အရငျဆုံး လုပျကွညျ့ပါ . ကံဆိုတာ နောကျမှ အလုပျက အရငျဆုံးလုပျရတယျ ။
ဘေးဘီဝဲယာကိုကွညျ့ပွီး ငါတဈယောကျတညျးပါလားဆိုပွီး အားငယျတတျတာလဲ ကိုယျ့ကိုကိုယျ မယုံကွညျခွငျးတဈမြိုးပဲ ငါ့အတှကျ ငါရှိတယျ ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ တဈယောကျတညျးလဲ ဆကျလြှောကျရဲတဲ့ သတ်တိတှေ လိုပါတယျ ။ ဘ၀မှာ မှေးလာကတညျးက တဈယောကျတညျး ဖွဈခဲ့သလို နောကျဆုံးကတြော့လဲ ကိုယျတဈယောကျတညျးပဲ ဖွဈလာတာမြိုးလေ ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျသာ အားကိုးပါ ။ ဒီလမျးကိုယျတဈယောကျတညျးလြှောကျလဲ ရောကျပါတယျ ။
နောက်ကိုလှည့်လို့လဲ ထိုးခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်တွေကြီးပဲ တွေ့တယ် အရှေ့ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲ အနာဂတ်က ပန်းခင်းထားတဲ့လမ်း မဟုတ်ပဲ အဖုအထစ်တွေအရမ်းများတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလဲ ဆက်လျှောက်ရဲရမယ်လေ ။
ဖေးမမယ့်လူမရှိလို့ လဲကျတိုင်းမထတော့ဘူးဆိုရင် . . .ဒီတစ်သက်ပြန်ထဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်တုန်းက လမ်းလျှောက်သင်ခဲ့တုန်းက အချိန်ကို သတိရပါ . . .လဲကျလို့သာ ပြန်မထခဲ့ဘူးဆိုရင် အခုချိန် သင် လမ်းလျှောက်တတ်နေမှာတောင် မဟုတ်ဘူး ပြီးရင် စက်ဘီးစီးသင်ခဲ့တုန်းကလဲ မှတ်မိသေးတယ် မစီးတတ် စီးတတ်တုန်းကလေ ဘရိတ်မထိန်းနိုင်လို့လဲကျသွားခဲ့တုန်းက လာပြီးထူမမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ တကယ်တမ်းထွက်လာတာကျတော့ ဒူးပြဲပြီလားတဲ့ ဒါဆိုမကြာဘူး စီးတတ်တော့မှာတဲ့
အရင်ချိန်လေးတွေပြန်တွေးကြည့်ပါ . . .အခုမှ လဲကျလိုက် ပြန်ထလိုက်ဖြစ်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး မွေးကတည်းက ကျွန်မတို့တွေ လဲကျလိုက် ပြန်ထလိုက်နဲ့ ရုန်းကန်ခဲ့ဖူးတာပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီတုန်းက ငါ လမ်းလျှောက်တတ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုပဲ ရှိခဲ့တယ် ဖြစ်ပါ့မလား ဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုပြီး မတွေးခဲ့ဘူး စက်ဘီးစီးတတ်ချင်စိတ်ပဲရှိခဲ့တာ အနာတရ ဖြစ်မှာကို စိတ်မပူခဲ့ဘူး
အခု နည်းနည်းလေး အသက်အရွယ်ရလာတော့တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အရင်ကြည့်လာတတ်ကြတာပါ ဆန္ဒတွေ အရင်ကလောက်မပြင်းပြတော့ဘူး ။ မစရသေးတယ် အလုပ်တစ်ခုကို ဖြစ်ပါ့မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်နေသမျှ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ငါ ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲ အရင်ဆုံး လုပ်ကြည့်ပါ . ကံဆိုတာ နောက်မှ အလုပ်က အရင်ဆုံးလုပ်ရတယ် ။
ဘေးဘီဝဲယာကိုကြည့်ပြီး ငါတစ်ယောက်တည်းပါလားဆိုပြီး အားငယ်တတ်တာလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မယုံကြည်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ ငါ့အတွက် ငါရှိတယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းလဲ ဆက်လျှောက်ရဲတဲ့ သတ္တိတွေ လိုပါတယ် ။ ဘ၀မှာ မွေးလာကတည်းက တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်ခဲ့သလို နောက်ဆုံးကျတော့လဲ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းပဲ ဖြစ်လာတာမျိုးလေ ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ အားကိုးပါ ။ ဒီလမ်းကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလျှောက်လဲ ရောက်ပါတယ် ။